Iindaba-Uhlalutyo lwebhetri ye-lithium kunye nomzi mveliso omtsha wezithuthi
Kwimeko yokuphuhliswa okukhulayo kwezithuthi zamandla amatsha, izithuthi zombane eziyi-2.2 zithengisiwe kwihlabathi liphela ngo-2019, ukwanda kwe-14.5% ngonyaka, kubalwa i-2.5% yentengiso zizonke. Okwangoku, malunga nentengiso yamandla esithuthi, i-BYD ibekwe kwindawo yesibini nguTesla. Kwiminyaka eyi-19, uTesla wathengisa izithuthi zombane ezingama-367820, ezikumgangatho wokuqala emhlabeni, zibala i-16.6% yetotali iyonke.
I-China lelona lizwe livelisa imveliso kunye nomthengisi wezithuthi zamandla amatsha. Kwi-2019, i-China inciphise inkxaso-mali yezithuthi zamandla amatsha. Umthamo wentengiso yezithuthi zamandla amatsha yayizi-1.206 yezigidi, yehla nge-4% ngonyaka-ngonyaka, i-4.68% yetotali iyonke. Phakathi kwazo, kukho malunga nezithuthi zombane ezingama-972000 kunye ne-232000 yezithuthi ezihlanganisiweyo.
Uphuhliso olunamandla lwezithuthi zamandla kwihlabathi liphela lukhuthaze ukukhula kwemveliso yebhetri ye-lithium-ion. Umthamo wokuhanjiswa kwebhetri ye-lithium-ion inyuke nge-16.6% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, ukuya kwi-116.6gwh ngo-2019.
Kwi-2019, iibhetri ze-lithium ezingama-62.28gwh zafakwa e-China, zenyuka nge-9.3% ngonyaka. Ukuthatha ukuba ukukhutshwa kwezithuthi zamandla amatsha kuyakuba zizigidi ezi-5.9 ngo-2025, ibango leebhetri zamandla liya kufikelela kuma-330.6gwh, kwaye iCAGR izonyuka ngama-32.1% ukusuka kuma-62.28gwh ngowama-2019.
Ibhetri ye-12v yeLithium Ion enokutsha, Ipakethe yeLithium yebhetri eyi-12 yeVolthi, Li Ibhetri, Ngo-18650 uNimh, ILithium Ion Polymer Ibhetri, 3.7 Ibhetri egcwalisekayo, Zonke iiMveliso